Blockchain Tekinoroji Iri Kuchinja Iyo Indasitiri Yemotokari - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Sezvo avhareji mota ichisvika izere-saizi yekubatana, yemagetsi uye yekuzvidzivirira mafambiro, kudiwa kweyakagadziriswa-uye yakarongedzwa dhatabhesi inokura uye matekinoroji anozivikanwa nekushandisa kwavo mu cryptocurrencies senge Bitcoin inogadzirwa mukupindura. Sezvo avhareji mota dzinogara dzichiswedera padhuze nekubatana, magetsi, uye kuzvitonga, pane zvakaenzana zvakawedzera kudiwa kwedhatabhesi yepamusoro inowirirana, uye tekinoroji inozivikanwa nekushandisa kwayo mu cryptocurrencies saBitcoin iri kubuda semhinduro.
Sekuparadzirwa ledger tekinoroji, blockchain inopa pachena uye yakachengeteka nzira yekuita bhizinesi. Blockchain haingobvumiri chete sosi yedata, asi zvakare inogonesa dhizaini-kune-mudziyo kutengeserana, smart zvibvumirano uye chaiyo-nguva kugadzirisa uye kugadzirisa. Blockchain inogona kupa pachena mu motokari indasitiri nekubatanidza zvisina musono madhijitari, yakagovaniswa hesera, mitengo, ma invoice, mubhadharo uye ruzivo rwezvinhu.
Blockchain kushandura nzira iyo data inotungamirwa uye mota dzenguva yemberi, uye zvakakodzera kutarisisa kana iri mukuchengetedza ruzivo rwemari kana kuita kuti iyo yakagovaniswa varidzi ive yakavimbika.
Blockchain yakagadzirirwa kukurumidza motokari kuvandudzwa kwemaindasitiri kwemotokari dzechizvarwa chinotevera uye kuvandudza ruzivo rwekutyaira sekukanganisa tekinoroji senge chakagadzirwa njere (AI) uye machine learning (ML) shanda mune sensor uye yekumisa masisitimu. The motokari indasitiri inogona kubatsirwa zvakanyanya kubva blockchain nekupa nzira dzakawanda dzekusimudzira kusimbisa iyo mangetani ekupa, kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwemotokari uye mabasa mumotokari. Tekinoroji dzakadai seAI, data hombe, uye IoT yakasanganiswa blockchain ichave nemhedzisiro yakakura uye kugadzira mikana kune iyo motokari vane chekuita neindasitiri.
Izvo zvakasiyana-siyana zve blockchain inopa kutengeserana kwakachengeteka uye kurongeka, kuwana zviri nani uye kubuda pachena kweruzivo, uye kukurudzira kuvimbana nekushandira pamwe pakati pemabhizinesi, vatengi uye mota. Blockchain inopa nzira yekuwedzera mabhenefiti emotokari idzi sezvo indasitiri inofamba ichienda kumotokari dzinozvimiririra, dzakabatana uye dzemagetsi. Blockchain tekinoroji inogonawo kubatsira kutyaira mhando dzemabhizinesi matsva muindasitiri senge imwewo muridzi wemota, zvirongwa zvemubairo wevashandisi, uye mamwe masevhisi ekufambisa, kugadzira kukwezva kwemhando uye kuvimbika.
Blockchain inogona zvakare kuita basa rakakosha muchikamu cheinishuwarenzi yemotokari nekugonesa kuchengetwa kweiyo chaiyo-nguva yemotokari data mileage, kuunganidza uye kubata kwedata kubva kumasensa emotokari, semuenzaniso pakutyaira kwevanhu vane inishuwarenzi. Blockchain inogona zvakare kufambisa kugovera kwemotokari senzira itsva uye inobatsira inishuwarenzi; vamwe vangasaziva izvi, asi blockchain tekinoroji inogona kuve yakakosha mukugadzira mota dzinozvimiririra. Blockchain shandisa makesi anoita seanoshanda kune iyo mangetani ekupa uye masevhisi emari, pamwe nekutsinhana kwakachengeteka uye kwakachengeteka kwedhiraivha nemutyairi data.
Mobi nevamwe vanogadzira mota vakaita seGM neBMW vakabatana kuti vagovane data pamotokari dzinozvityaira vachishandisa. blockchain tekinoroji. A blockchain-yakavakirwa sisitimu inoita kuti zvive nyore kugovera kutyaira, asiwo muridzi wemotokari nemumwe. Marejista akagoverwa, akadai blockchain, inogonesa kuendeswa kwe data inodiwa pakati pevaridzi vemotokari, vaongorori nevagadziri.
Mumakore maviri apfuura yakakura motokari industry yatanga kuendesa blockchain tekinoroji mu motokari mangetani ekupa kuchengetedza, motokari masevhisi, mota dzinozvimiririra, kugadzira maitiro uye inishuwarenzi. BMW naGeneral Motors vanoedza nema blockchains neMobi Initiative yavo iyo yavanogovana data kubva kune avo vanozvityaira mota navo nevamwe vagadziri.
apo blockchain inochinjisa tsandanyama dzayo dzinoparadza mumaindasitiri akati wandei, the motokari chikamu chinopa mukana wakakura. As motokari makambani anoshandisa aya matekinoroji uye maitiro mune yavo shanduko yedhijitari kuedza, ivo motokari blockchain musika unotarisirwa kukura kusvika pamadhora mabhiriyoni gumi nematanhatu panosvika 16.
Sezvo vazhinji vanogadzira automaker, zvivakwa uye bhizinesi vanowana nzira nyowani dzekubatanidza blockchain, vatengi vanozoona shanduko yekufambisa kutyaira Distributed Ledger Technology (DLT). Kubva pakuchinja kunyangwe zvidiki-diki zvechiitiko chekutyaira kusvika pakuvandudza kuchengetedzeka kwevatyairi mumugwagwa, blockchain inogona kuratidza kuva chimurenga chekuchinja kwezviitiko zvekuzvimirira. Nemotokari dzisisiri imwe nzira yekufambisa, blockchain ichaita basa rakakosha mukuchinja kwehunyanzvi kuchauya.
Kufamba, Mangetani ekupa, Logistics, Retail, Lease, smart kugadzira, kurarama kwakabatana, IoT uye inishuwarenzi yakabatana ingori dzimwe dzenguva refu dzinoshanda nzvimbo uko blockchain tekinoroji iri kushandura vagadziri vemotokari.
Iyo yakachengeteka uye yakasarudzika fomu yekuvharidzira ine mukana wekuve imwe yeanonyanya kukoshesa matekinoroji inogonesa iyo motokari indasitiri kupinda munguva itsva yemotokari dzakangwara. Nyangwe blockchain ichiri tekinoroji nyowani uye zvakaoma kutaura kuti inguvai ichashandiswa zvakanyanya muindastiri, zviri nyore kuona kuti mabhenefiti eiyi tekinoroji yehunyanzvi atosvika. Yakachengeteka, yakasarudzika fomu yekunyorera ine mukana wekuve imwe yeakakosha matekinoroji anogonesa iyo motokari indasitiri yekusvetukira munguva itsva iyi.
Sezvese motokari indasitiri yezvemari inogadzirira ramangwana risingadzivisike umo madhijitari tokeni anoshandiswa kutenga kwenguva yakareba kushandiswa kwe blockchain tekinoroji, iyo motokari indasitiri yakakosha kupfuura zvatinofunga.
Nepo vazhinji vepasirese vari kufunga nezve iyo blockchain tekinoroji inogona kushandiswa kuchera yakawanda uye yakawanda Bitcoins, iyo motokari indasitiri iri kuyedza kuidyara mumotokari yako yeramangwana. Blockchain tekinoroji yakatoshandiswa nemasangano mazhinji emari uye inowanikwa kuti iongororwe nevagadziri vemotokari, vatengesi, uye inshuwarisi, nepo mamwe makambani akatozivisa kuda kwavo kuongorora nekushandisa kugona kwavo mumabhizinesi avo. Kunyangwe kugona kwayo tekinoroji, iyo indasitiri ichiri mumatanho ekutanga ekushandisa blockchain kune ayo bhizinesi zvigadzirwa uye network.
Iko kuvandudza kwe blockchain senzira inoshanda yekuchengetedza uye yekutaurirana data ndeye inovimbisa yekuwedzera kune equation. Blockchain tekinoroji yakaratidza kuti inogona kugadzirisa matambudziko mazhinji nekupa motokari makambani uye vadyidzani vavo vane chakavimbika uye chakajeka chishandiso chekubata zvakanaka, kuchengetedza, kutonga uye kushandisa mota data.